mardi, 09 avril 2019 12:57
Lalaon’ny Nosy – Baskety: Nomena “calcium” sy vitamina ireo mpilalao malagasy
Manao fanazarantena in-droa isan’andro etsy amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina ireo mpilalao voafantina mandrafitra ny ekipam-pirenena Malagasy lahy sy vavy, amin’ny taranja Baskety hiatrika ny Lalaon’ny Nosy hatao atsy Maorisy amin’ny volana jolay ho avy izao.
Nanolotra “calcium” sy vitamina ho an’ireo mpilalao, omaly hariva, ireo minisitera mpiahy ny taranja basikety amin'ny fanomanan-tena ny lalaon'ny Nosy dia ny Minisitry ny filaminana sy ny Minisitry ny fampianarana ambony sy fikarohana siantifika, noho fangatahan'ireo mpilalao mba hanampiana ny hery noho ny hamafin’ny kotrana.
mardi, 09 avril 2019 12:38
Isotry: Anarana sisa ny “Teatra Monisipaly”
Efa aman-taonany maro no tsy nisy teatra tato amin’ity toerana ity. Tsy ny tropy teatraly no tsy vonona, fa ny fotodrafitrasa no tsy afaka nampiasaina noho ny fahasimbany. Mijanona ho fampanantenana ny fanarenana ny “Teatra Monisipaly” Isotry-Antananarivo.
Tsy vitan’ny hoe fialamboly anefa ny mijery teatra, fa fitaizana ary tena nanana ny lanjany ara-tantara mikasika ny fitiavan-tanindrazana.
mardi, 09 avril 2019 12:21
Fasankarana: Sokatra “radiata” 82 sarona
Tao anaty valizy, tonga avy any Atsimo Andrefana ireo sokatra ireo, ary efa tao anaty fiarakaretsaka hoentina toeran-kafa no sarona, rehefa nahatsikaritra fihetsika hafahafa ny Polisy miasa eny amin’ny tobim-piantsonana fiarakodiana Fasankarana Antananarivo, ny sabotsy 6 aprily 2019.
Sokatra amin’ny karazany “radiata” miisa 82 no tao, rehefa nosavaina. Maty ny 3 tamin’ireo. Efa nalefa any amin’ny toby fanaraha-maso ny biby, izay eo ambany fiahian’ny ministeran’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ireo sokatra velona.
Sokatra miisa 219 no sarona hatramin’ny fiandohan’ity taona ity, saika haondrana an-tsokosoko.
mardi, 09 avril 2019 12:11
Fahasalamam-bahoaka: Hamatsy vola 90 tapitrisa dolara an’i Madagasikara ny Governemanta Amerikana
Fanatanterahana tetikasam-pahasalamana “Accessible Continuum of Care and Essential Services (ACCESS)” izy ity, izay haharitra dimy taona, ary vatsian'ny USAID vola mitentina 90 tapitrisa dolara.
Mikendry indrindra ny hanatsara sy hanitatra ny asam-pahasalamana omena ny vahoaka Malagasy ny tetikasa.
Vahoaka eo amin’ny 16 tapitrisa eo ho eo no handray tombontsoa avy amin'ny tetikasa ACCESS, izay hiasa any amin'ny faritra 10 eto Madagasikara (Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Andrefana, Menabe, Melaky, Boeny, Sofia, DIANA, SAVA ary Analanjirofo).
mardi, 09 avril 2019 11:50
Antananarivo Renivohitra: 320 000 m3 ny filàna rano, 200 000 m3 ny tolotra misy
15 taona tsy nisy fampiasam-bola hamatsiana rano teto Antananarivo Renivohitra, izay no nambaran'ny praiminisitra Ntsay Christian ka izay no nambarany fa mahatonga ny fahampian-drano eto. 200 000 m3 isan'andro ny tolotra misy nefa 320 000 m3 ny filàna rano.
Hisy araka ny nambarany ny fanorenana fotodrafitrasa hanampiana ny efa misy, hampitomboana ny famatsian-drano eto Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina, ka hotrandrahana ny reniranon'Ikopa hamatsiana ny faritra atsinanan'Antananarivo. Hisy koa fanaovana "forages" eny Itaosy sy Ambohidrapeto.